सीमावर्ती क्षेत्र उच्च जोखिम, तराई कोरोनाको ‘हटस्पट’ बन्ने खतरा « Pahilo News
सीमावर्ती क्षेत्र उच्च जोखिम, तराई कोरोनाको ‘हटस्पट’ बन्ने खतरा
प्रकाशित मिति :2May, 2020 8:01 am
काठमाडौं, २० बैसाख । नेपाल र भारतका नागरिक लुकिछिपी आवतजावत गर्दा तराईका सीमावर्ती क्षेत्र कोरोना भाइरस संक्रमणको ‘हट स्पट’ बन्ने जोखिम देखिएको छ । सीमावर्ती जिल्लाहरू उच्च जोखिममा रहेकाले स्थानीय बासिन्दाले बढी सतर्कता अपनाउनुपर्ने विज्ञहरूको सुझाव छ ।
सरकारले कोरोना भाइरसबाट सम्भावित संक्रमित पहिचानका लागि परीक्षणको दायरा विस्तार गरेसँगै सीमावर्ती क्षेत्रमा बढी संक्रमित भेटिएका छन् । प्रदेश ५ को सीमावर्ती रुपन्देही र बाँके जिल्लामा शुक्रबार दुई जना पुरुषमा संक्रमण पाइएको छ ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. विकास देवकोटाले भने, ‘सीमावर्ती क्षेत्रमा संक्रमणका केस बढी देखिन थालेका छन् । दुई देशबीचको नाका क्षेत्र जोखिमयुक्त छ ।’ नेपाल र भारतबीच १ हजार ७ सय ५१ किलोमिटर खुला सीमा छ । भारतमा कोरोना संक्रमण तीव्र गतिमा बढिरहेको छ । त्यहाँ संक्रमितको संख्या ३५ हजार नाघेको छ । संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या १ हजार १ सय ४७ पुगेको छ ।
रुपन्देहीमा भेटिएका संक्रमित भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा मजदुरी गर्दै आएका थिए। संक्रमित २५ वर्षीय युवा हुन् । उनी वैशाख ५ गते सीमावर्ती सम्मरीमाई गाउँपालिकाको ठोठरी नाकाबाट लुकेर भित्र प्रवेश गरेका थिए । सरकारले कोरोना भाइरसको सम्भावित संक्रमण रोक्न चैत ९ गतेदेखि लकडाउन गरेपछि उनी नाकामा लुकेर बसेका थिए ।
नेपालगन्जमा भेटिएका संक्रमित पनि भारतको रुपैडिहा क्षेत्रबाट आएका व्यक्तिबाट संक्रमित भएको जनाइएको छ । नेपालगन्जका संक्रमित ६० वर्षीय व्यक्ति एकलैनी क्षेत्रका भएको जनाइएको छ । उनी भारतको बहराइच क्षेत्रबाट एक महिनाअघि नेपाल आएको पाइएको छ ।
दुवै संक्रमितको नाक तथा घाँटीको र्‍याल (स्वाब ) नमुना परीक्षण गरिएको थियो। पोलिमरेज चेन रियाक्सन (पीसीआर) विधिबाट परीक्षण गर्दा कोरोना भाइरस पोजिटिभ देखिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
टेकुस्थित राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोशालामा परीक्षण गरेर पुष्टि भएपछि मन्त्रालयले संक्षिप्त विवरणसहित सार्वजनिक गरेको थियो । उनीहरुको ‘ट्राभल हिस्ट्री’ सहित ट्रेसिङको कार्य अघि बढाइएको इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका निर्देशक डा. वासुदेव पाण्डेले बताए । अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकबाट